Ny rafitra lahatsary TAG dia manorina eo amin'ny sehatry ny fanarahan-dalàna, fanaraha-maso ary Multiviewer amin'ny sehatry ny fampidirana fanohanana amin'ny fangatahana bebe kokoa ary manolotra tolotra tarika misy tanjona - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny rafitra lahatsary TAG dia manorina amin'ny sehatry ny fananganana onjam-bidy eo amin'ny tsena, fanaraha-maso ary Multiviewer Platform amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fangatahana fampiasa bebe kokoa ary manolotra seha-joroana nokendrena
Ny rafitra lahatsary TAG dia manorina amin'ny sehatry ny fananganana onjam-bidy eo amin'ny tsena, fanaraha-maso ary Multiviewer Platform amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fangatahana fampiasa bebe kokoa ary manolotra seha-joroana nokendrena
Ny fampivoarana sy fanatsarana nampidirina tao amin'ny IBC dia manatanjaka ny toerany tsy manam-paharoa ao amin'ny orinasa ary manome sanda lalindalina manerana ny Live Production, Playout, Distribution ary OTT fampiharana amin'ny horonantsary
Amsterdam - Septambra 13, 2019 - TAG Video Systems, mpitarika an'izao tontolo izao amin'ny vahaolana fampidirana IP Probing, Monitoring ary Multiviewer mifototra amin'ny rindrambaiko, dia miorina amin'ny sehatra tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fampiharana lahatsary bebe kokoa sy ny fampitomboana ny fiasa sy ny fiasa izay manamafy ny toerany ny rindrambaiko voalohany sy tokana voalohany 100%, vahaolana 100% IP afaka mihazakazaka amin'ny alàlan'ny hardware-off-the-shelf-hardware ho an'ny efatra apetraka horonantsary laharana efatra: Famokarana mivantana, Playout, fizarana ary OTT. Ny orinasa dia mampiseho ny fanjakany ny MCM-9000 ao amin'ny IBC 2019 miaraka amina fitaovana manokana sy ny fanamafisana izay manamafy ny fahafaha-milefitra amin'ny alàlan'ny famelana ny vahaolana mitovy amin'ny fiasa rehetra amin'ny fanamafisana ny fahaleovantena, ny fahafaha-milefitra ary ny fahafaha-manitatra ny fivezivezena IP.
Tamin'ny voalohany dia natsangana ho vahaolana mifototra IP hiatrehana ny tena fanaovana Probing, Monitoring and Multiviewing for Distribution and OTT, TAG dia nitondra ny fahaizany amin'ny Live Production sy Playout. Ny fanafainganana ny SMPTE Ny ST 2110 manolo ny SDI ao anaty fampitaovana sivana dia nanosika ny IP hankasitraka bebe kokoa amin'ny tsena, manolotra fitomboana sy fahalefahana mampitombo ny fahaiza-manao vaovao toy ny famokarana lavitra sy miara-miasa, ary manome sakany tsy refin'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso tsy an-kiato amin'ny fanaraha-maso sy fanandramana ireo famantarana ny haino aman-jery tsy voafehy ao amin'ny IP tontolo iainana.
Mandra-pahatongan'ny fandrosoana farany nataon'ny TAG dia nanantitrantitra ny haben'ny haingam-pandeha avo lenta, ny marika lahatsary tsy voahazona izay nahatonga ny mpampiasa hametraka ireo haino aman-jery Multiviewer fananana, ny famerana ny fahafaha-milefitra sy ny fahaiza-miaina. Ny fomba fiasan'ny rindrambaiko 100% TAG, miasa amin'ny fitaovan'ny mpizara COTS mahazatra, mandresy ireo fameperana ireo ary mamela ny mpamoaka ny fanaparitahana ny fitaovana vita amin'ny tanjona ary tena manararaotra ny habeny sy ny fahaizam-bola miaraka amin'ny vahaolana IP-natokana ho an'ny rindrambaiko raha mbola manome vahaolana latina ambany ( 2fps). Ny fahaiza-manaon'ny lozisialy TAG dia namela azy hanapaka ny rindrambaiko / bandwidth / fotoana voafetra ST 2110 ao amin'ny hardware COTS ary nitondra vahaolana avo lenta miaraka amin'ny fifandraisana 100GE marobe sy fanohanana ny famerenan'ny tambajotra ST-2022-7.
"Ny fampiharana tsirairay dia manana ny andrana misy azy manokana saingy alao sary an-tsaina ny zavatra azonao atao raha ny format sy ny fenitra rehetra mora tanterahina ao anatin'ilay sehatra rindrambaiko mitovy sy amin'ny tontolo IP," hoy Abe Zerbib, TAG CEO. "Ny TAG's MCM-9000 no rafitra voalohany eran'izao tontolo izao izay mitambatra ny fanaraha-maso ireo marika voapoizina sy tsy voapetaka amin'ny alàlan'ny efijery iray ho an'ny fizarana lahatsary efatra voalohany - ary mandeha amin'ny fitaovana tsy ety. Ankehitriny izahay dia nanitatra ny fahazoana sy nampiditra ny endri-javatra mifototra amin'ny fampiharana mba hahafahan'ny mpampita ny fampitomboana ny fahafaha-milefitra sy ny fivoarana mora ary ny salan'isa tsy manova na mampiditra ny fotodrafitr'izy ireo fototra. Tena faly izahay mizara ireo fivoarana ireo amin'ny mpitsidika ny IBC! ”
Ny vahaolana enti-manelanelana ny TAG dia manohana amin'ny alalan'ny fahitalavitra 40,000 mahomby amin'ny sehatra manerana izao tontolo izao ary manohana ny fananganana ny programa 100 tsy manam-paharoa amin'ny rindrambaiko amin'ny sehatry ny programa mba handinihana, hanaraha-maso sy hikirakirana ho an'ny famokarana mivantana, playout, fizarana ary OTT ao anaty ecosystem .
fampitana injeniera fampitana Engineering Cobalt Encoder Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor IBC ibc 2019 Multiviewer OTT Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC tenifototra TAG VS Video injeniera	2019-09-10
Previous: Mampiseho ireo fomba vaovao farany i Aperi amin'ny fahamaotinana marina sy ny fampiasa amin'ny Live IP Media Workflows mivantana amin'ny IBC2019
Next: MEDIAPRO nisafidy an'i Tedial ho an'ny fampiharana MAM Corporate